နှလုံးသားရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခံစားချက်တွေ ဖွင့်ဟလာတဲ့ တိုင်ရွန် - Cele Connections
နှလုံးသားရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခံစားချက်တွေ ဖွင့်ဟလာတဲ့ တိုင်ရွန်
တိုင်ရွန်ကတော့ မော်ဒယ်လ်လောကမှာ ကျော်ကြားသူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို အခုချိန်မှာ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကိုရီးယားမင်းသားတစ်ယောက်လို ချောမောတာကြောင့် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကိုလည်း ရရှိနေသူတစ်ယောက်ပါ။ တိုင်ရွန်ဟာ တက်သစ်စမင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ၀ါရင့်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အကောင်းဆုံးပါဝင် သရုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကမှ ရုံတင်ထားတဲ့ “အခမ်းနားဆုံးမေတ္တာနဲ့ ချိုးရုပ်”ဇာတ်ကားတို့မှာလည်း တိုင်ရွန်က ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို တခဲနက်ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့Crush တစ်ယောက်အဖြစ် တင်စားခြင်းခံရတဲ့ တိုင်ရွန်က သူ့ရဲ့နှလုံးသားရေးရာကိစ္စကို အတိအလင်းထုတ်ဖော်ပြောတာမျိုးတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာတော့ ဖီးလ်နေတဲ့စာသားလေးတွေ မကြာခဏရေးတတ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကတော့ သို့လော သို့လောနဲ့ မသဲမကွဲဖြစ်နေကြတာပါ။ တိုင်ရွန်က မကြာသေးခင်ကလည်း “မင်းကို နေ့တိုင်းတွေ့နေရသူအားလုံးကို ငါမနာလိုဖြစ်မိတယ်” …. ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံကိုထပ်မံဖမ်းစားလိုက်ပြန်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အမာခံပရိသတ်တွေကတော့ တိုင်ရွန်တစ်ယောက် ဘယ်သူ့ကိုနေ့တိုင်းတွေ့ချင်နေတာလဲဆိုပြီး သိချင်စိတ်ပြင်းပြနေကြပါတယ်။
တိုင်ရွန်တစ်ယောက် ဘယ်သူ့ကိုနေ့တိုင်းတွေ့ချင်နေပြီး ဘယ်သူတွေကိုတော့ မနာလိုဖြစ်နေလဲဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးက ခန့်မှန်းပေးကြပါဦးနော်။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း တိုင်ရွန်ရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
နှလုံးသားရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ခံစားခကျြတှေ ဖှငျ့ဟလာတဲ့ တိုငျရှနျ
တိုငျရှနျကတော့ မျောဒယျလျလောကမှာ ကြျောကွားသူတဈယောကျဖွဈသလို အခုခြိနျမှာ သရုပျဆောငျတဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ကိုရီးယားမငျးသားတဈယောကျလို ခြောမောတာကွောငျ့ မိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးဝနျးရံမှုကိုလညျး ရရှိနသေူတဈယောကျပါ။ တိုငျရှနျဟာ တကျသဈစမငျးသားတဈယောကျအနနေဲ့ ဝါရငျ့သရုပျဆောငျတှနေဲ့အတူ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှမှော ကရြာဇာတျရုပျကို အကောငျးဆုံးပါဝငျ သရုပျဆောငျနပွေီဖွဈပါတယျ။ မကွာသေးခငျကမှ ရုံတငျထားတဲ့ “အခမျးနားဆုံးမတ်ေတာနဲ့ ခြိုးရုပျ”ဇာတျကားတို့မှာလညျး တိုငျရှနျက ဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပီပွငျပွငျသရုပျဆောငျနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးဝနျးရံမှုကို တခဲနကျရရှိခဲ့ပါသေးတယျ။
မိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့Crush တဈယောကျအဖွဈ တငျစားခွငျးခံရတဲ့ တိုငျရှနျက သူ့ရဲ့နှလုံးသားရေးရာကိစ်စကို အတိအလငျးထုတျဖျောပွောတာမြိုးတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာထကျမှာတော့ ဖီးလျနတေဲ့စာသားလေးတှေ မကွာခဏရေးတတျတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေတော့ သို့လော သို့လောနဲ့ မသဲမကှဲဖွဈနကွေတာပါ။ တိုငျရှနျက မကွာသေးခငျကလညျး “မငျးကို နတေို့ငျးတှနေ့ရေသူအားလုံးကို ငါမနာလိုဖွဈမိတယျ” …. ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပရိသတျတှရေဲ့ အာရုံကိုထပျမံဖမျးစားလိုကျပွနျပါတယျ။ သူ့ရဲ့အမာခံပရိသတျတှကေတော့ တိုငျရှနျတဈယောကျ ဘယျသူ့ကိုနတေို့ငျးတှခေ့ငျြနတောလဲဆိုပွီး သိခငျြစိတျပွငျးပွနကွေပါတယျ။
တိုငျရှနျတဈယောကျ ဘယျသူ့ကိုနတေို့ငျးတှခေ့ငျြနပွေီး ဘယျသူတှကေိုတော့ မနာလိုဖွဈနလေဲဆိုတာ ပရိသတျကွီးက ခနျ့မှနျးပေးကွပါဦးနျော။ Cele Connections ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး တိုငျရှနျရဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျတှကေို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
“ လေးစားအားကရြတဲ့ အိုငျဒေါနဲ့ အတူတူ စုံတှဲသီဆိုခှငျ့ရခဲ့လို့ ဂုဏျယူမဆုံးဖွဈနတေဲ့ ဘငျဂမြငျဆုမျး”